Nitsangana ny Tudor, tandindon'i Angletera | Fitsangatsanganana tanteraka
La Tudor Rose (indraindray antsoina hoe Union rose na tsotra Nitsangana anglisy) no tandindon'ny heraldika nasionalin'i Angletera hatramin'ny faramparan'ny taonjato antenatenany. Ity voninkazo ity dia nalaina avy tamin'ny Trano Tudor, ilay tarana-mpanjaka nampitambatra ireo trano ambony tao Lancaster sy York.
Ao amin'ny ampinga nentin-drazana any Angletera, ity raozy ity dia naseho tamin'ny felana fotsy dimy (izay maneho ny House of York) ary ireo mena dimy hafa (ho an'ny iray any Lancaster). Na izany aza, eo amin'ny tontolon'ny floristry, mavokely ny rose Tudor, hue iray izay vokatry ny fifangaroan'ny raozy mena sy ny raozy fotsy.
1 Fiaviana ara-tantara
2 Nitsangana i Tudor: tandindon'i Angletera
3 Ilay raozy dia lavitra an'i Angletera
Ny Tudor rose dia manana fiampangana an'ohatra mahery satria maneho ny faran'ny antso Adin'ny raozy, ny fifandonana mitam-piadiana izay nifanehatra tamin'ny fianakaviana aristokraty roa matanjaka indrindra tany Angletera nandritra ny taonjato faha-XNUMX.
Ny ady dia nifarana tamin'ny fandresen'i Henry avy any Lancaster tao amin'ny Adin'i Bosworth Field (1485). Ilay mpandresy dia nanambara ny tenany ho mpanjaka tamin'ny anaran'i Henry VII, na dia herintaona taty aoriana dia nanambady izy Elizabeth avy any York, arak'izany ny fampiraisana ny fianakaviana sy ny fanatanterahana ny fampihavanana. Mba hampisehoana an'io firaisankina vaovao io amin'ny marika tokana, dia noraisina ilay raozy roa loko (avy eo mavokely mavokely), izay manomboka amin'io fotoana io dia ho Tudor rose na union rose.
Ankoatry ny angano, ny zava-misy ara-tantara dia manamafy fa nandritra ny Ady an-trano anglisy dia nandriaka ny raozy fotsy, nampiasain'ny House of York. Toa, ny mena mena dia noraisina taorian'ny faran'ny fifandonana ho an'ny tanjona tokana amin'ny famoronana marika vaovao. Sehatra fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao hanamafisana ny firaisam-pirenena vaovao ary hamehezana ny ratra taloha.
Ny Tudor Rose, vokatry ny firaisana teo amin'ny tandindon'ny House of Lancaster (mena mena) sy ny House of York (rose fotsy).
Nanomboka teo, nandritra ny tantaran'i Angletera dia nitsangana tamin'ny fomba maro samihafa i Tudor. Indraindray amin'ny a raozy roa sosona, ny hafa miaraka amin'i ny iray amin'ireo raozy apetraka amin'ny ilany iray hafa ary, mazàna kokoa, amin'ny maha mpitovo raozy mifangaro. Ny fanehoana ny raozy apetraky ny satro-boninahitra dia tena mahazatra ihany koa, ho toy ny tandindon'ny fanjakana mpanjaka anglisy mitambatra.
Nitsangana i Tudor: tandindon'i Angletera
Androany, ny raozy Tudor dia heverina ho marika ofisialin'i Angletera, na dia tsy an'ny Fanjakana Mitambatra. Raha ny tena izy dia samy mampiasa ny tandindony avy ny tsirairay amin'ireo firenena efatra mandrafitra ny firenena: Scotland manana ny tsilo, valesa ny boka e Irlandy Avaratra ny shamrock, izay mariky ny Repoblikan'i Irlandy ihany koa.
Ny raozy Tudor dia hita eo amin'ny marika ofisialin'ny Guardians of the Tilikambon'i Londres ary ny mpiambina ny mpanjakavavy. Niseho an-taonany maro koa izy io tany avadika ny Vola 20 pence. Mazava ho azy, izy koa no mitarika ny palitaon'ny fanjakana anglisy ary ny fitsarana Faratampony avy amin'ity firenena ity.
Ho fanampin'izany, mpankafy ny baolina lavalava fantatr'izy ireo tsara fa eo amin'ny lobaky ny mpilalao ao amin'ny ekipam-pirenen'i Angletera ny raozy.
Mpilalao ekipa rugby anglisy, miaraka amin'ny raozy eo amin'ny tratrany
Tanàna sy tanàna anglisy maro no mirehareha mitafy izany Nitsangana anglisy amin'ny marikao eo an-toerana. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia Sutton Coldfield, akaikin'i Birmingham, izay i Henry VIII mihitsy no nanome ny satan'i Ciudad Real. Ny rose Tudor dia hita ihany koa amin'ny akanjo fiarovan'ny tanànan'ny oniversite Oxford.
Toy izany koa, tokony homarihina fa ny raozy dia ampiasaina amin'ny antontan-taratasy sy tranokala rehetra an'ny Biraon'ny fizahan-tany any Angletera (VisitEngland), na dia misy famolavolana monochrome aza.
Ilay raozy dia lavitra an'i Angletera
Saingy ny raozy sendika malaza dia miseho amin'ny toerana hafa lavitra an'i Angletera. Ohatra, ny distrika sy faritanin'i Mpanjakavavy ao New York City, mitafy raozy Tudor amin'ny saininy sy tombo-kase ofisialy. Ary koa ny sainan'i Annapolis any Maryland, mampiseho raozy Tudor eo anilan'ny tsilo avy any Ekosy, izay samy nasiana satro-boninahitra.
Raha tsy miala any Etazonia dia misy iray hafa te hahafanta-javatra ara-tantara sy ara-jeografika ao amin'ny fanjakan'i South Carolina. Any no ahitantsika tanàna antsoina York, fantatra amin'ny anarana «ny tanànan'ny raozy fotsy». 50 kilometatra fotsiny miala, mianatsimo atsinanana ary tsy miala amin'ny fanjakana, dia misy tanàna iray hafa mitondra ny anarana hoe Lancaster. Ary ny anaram-bosotra an'ity tanàna ity, mazava ho azy, "ny tanànan'ny mena mena."
Ary farany, afaka mahita ilay raozy Tudor ao amin'ny palitao kanadianina, tsangambaton'ny vanim-potoana fanjanahana britanika izay niaritra ny fotoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Nitsangana ny Tudor, voninkazo nasionalin'i Angletera